Sulula - Wikipedia
Sululli bakka baay’ee gad dhooqaa fi gad fageenya guddaa qabu yoo tahu yeroo baay'ee tulluuwwanii fi gaarreniin marfamee kan bishaan jidduu yaa'uudha. Sululli irra caalatti kan uumamu biyyeen lagaan ykn burqaan haramuu irra kan ka'eedha.
Sulula Calchaquí Arjentiinaa
Sulala danaa-U Paarkii Biyyoolessaa Glacier, Montana, Yunaaytidi Isteetsi
Sulula irraangadee Romsdalen, Noorwey.
Sulullan bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis Sulula Qiinxamaa Guddaa (Rift Valley) fi Sulula lagaati. Sululli Qiinxamaa guddaan sababa humna lafa keessattiin uumame. Kunis, sochii qaama dachee keessatti uumamuun qaamni dachee baqaquun ennaa gara bitaa fi mirgaatti addaan harkifamu qaamni jidduutti argamu gad liqimfamuudhaan sulula guddan uuma. Sululli lagaa kan uumamu laggeen naannoolee lafa gaarreenii fi pilaatoowwan keessaa maddan humna guddaan gara naannoo lafa dakeetti ennaa yaa’an qaama dachee bitaa fi mirga lagaatti argamu gad qotuun (nyaachuun) biyyee haranii ennaa deeman lafa qilee fi baay’ee gad dhooqaa (hallayyaa) ta’e uumu.
Sululli bakka itti argamuEdit
Sululli Qiinxamaa Guddaan Baha Afrikaa qaama sulula Guddaa Addunyaa biyya Sooriyaatii ka’uun baha Afrikaa keessa qaxxaamuruun hanga Moozaambikitti fulla’u dheerina hanga 6000 km ta’u qaba. Afrikaa keessatti sululli Qiinxamaa Guddaan kun naannoo Hara Turkaanaa ennaa gahu bakka lamatti qoodama. Naannoo Hara Viktooriyaa gara Dhihaa fi Bahaan marsuun erga naannoo hara Maalaawii gaheen booda walitti deebi’uun hanga biyya Moozaambikiitti fulla’eetiin argama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulula&oldid=37225" irraa kan fudhatame
Last edited on 24 Fulbaana 2021, at 12:43
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 24 Fulbaana 2021, sa'aa 12:43 irratti.